My Smart Home afaka herintaona mahery - tsanganana / mpitari-dalana - SmartMe
Tsotra ny hevitra momba ny Smart Home - "tsy maintsy tonga ho azy ny zava-drehetra". Izaho manokana dia nanampy an'ity fitsipika ity - "miaraka amin'ny fahafahan'ny fanaraha-maso ataon'ny any ivelany". Fa maninona Raha ny tenako na ny namako efa zatra ilay hoe "velona ny trano", ny olona izay avy any ivelany (na ny ray aman-dreniko ohatra) dia aleony mampiasa fitaovana "" tanana ". Manaja ny vahiniko aho, ka nanapa-kevitra aho fa ho sariaka amin'izy ireo koa ny "akaniko". Ho fanampin'izany, ny tsirairay dia mianatra amin'ny fiandohan'ny teknolojia vaovao ary mety tsy mahazo aina tanteraka amin'ireo vokatra vaovao ireo (araka ny nanoratako eto). Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba nanamboarako ny trano fonenako. Azonao atao ny mandray azy io ho toy ny karazana torolàlana / tsanganana, na ho fahalianana te hahafanta-javatra.
Ny baiko arosoko dia mahazatra be, fa noho ny fitantanam-bola dia nandamina ny fividianako toy izao aho.
Voalohany indrindra - fahadiovana
Eny, ny fividianako voalohany dia ny robot fanadiovana Viomi v2 Pro (azonao atao ny mamaky ny famerenana eto). Ny mpanadio banga dia miasa tsara hatreto. Efa nanandrana vitsivitsy aho, saingy tsy nisy nanana ny nantenako tamin'ny fitaovana toy izany izy ireo. Eny, misy fatiantoka izany - tsy mifandray amin'ny mpanampy amin'ny google izy, indraindray very ny sarintany (na dia tsy nisy toa izany aza taorian'ny fanavaozana farany), tsy misy asan'ny "faritra tsy-mop". Na izany aza, ny tombony azony dia lehibe noho ny fatiantoka.
Fametahana voalohany. Tokony ho fantatrao fa herintaona lasa izay dia tsy nisy mpanadio vovoka tany Polonina izay hanafoana toy izao, izany hoe amin'ny endriny A. Ny Viomi dia manadio ny gorodona amin'ny fomba itovizany amin'ilay litera Y. Herin'ny suction avo (Max.2100 Pa) koa nandray anjara tamin'ity, fa nividy an'ity modely ity aho. Ary olana faharoa - fisehoana. Tena tiako be ilay izy. Tsy mbola nahita robot fanadiovana banga vita tsara toy izany aho hatreto. Androany, ampiako ny Xiaomi Vacuum Mop Pro amin'ny vokatra Viomi. Izy io dia manana asa mitovy ary mifampiresaka amin'ny mpanampy amin'ny google.
Hey google! Tsy miteny poloney ianao, fa mbola mora ampiasaina.
Eny, inona ny trano hendry raha tsy misy mpanampy amin'ny feo? Mpankafy Iron Man foana aho. Raha vao nahita an'i Tony Stark niasa niaraka tamin'i Jarvis aho dia nieritreritra - maniry izany koa aho! Nividy mini Google Home aho. Azonao atao ny mahita ny hevitra eto. Tokony holazaiko aminao fa mbola manan-kery ity famerenana ity. Marina fa nivoaka ny Google Nest mini (sy ny akany hafa), saingy kely ny fahasamihafana. manohana ity farany. Ny hany azoko lazaina dia tsy azoko an-tsaina hoe miasa tsy misy azy io. Androany, ity fanamafisam-peo kely ity dia mifehy saika ny fitaovana rehetra ao an-tranoko. Mahaliana fa ny rahalahiko (izay efa manana robot fanadiovana sy mpandahateny google) dia nahita fa zavatra tena ilaina tokoa io. Miarahaba anao, ry rahalahiko - tsarovy ny fientanam-po dia mahazo ny olon-drehetra. Fanamarihana iray. Aza adino fa ny trano Google dia mbola tsy mandeha amin'ny fiteny poloney.
Tsy mahira-tsaina ny latabatra? Tsy olana amin'ny tetik'asa an-trano ihany koa io!
Ary mitranga izany fa misy ny fitaovana izay tsy marani-tsaina. Mila manilika azy ireo ve isika noho ny famolavolana ny trano fonenanay? Tsia, ampy ny plugs, ny strip na ny "chromecasts" mety. Andao atomboka amin'ny chromecast satria nividy hafa ity. Manana fahitalavitra roa aho (afaka mahazo zavatra koa ny mpanakanto ...), ny iray manana TV Android, ny iray kosa tsy. Tany am-piandohana, nampifandraisiko taminy ilay chromecast tsy nisy Android TV. Nandaitra be tao, fa ... Tsy niasa tsara tamin'ny Google Home ny TV Android (ny famonoana azy io sy ny fandehanana lavitra) no namindrako ilay chromecast tamin'ilay iray hafa ary ... niasa tsara daholo Ny fahitalavitra faharoa dia miandry ny "plug" farany avy amin'ny "google" ho mora (ankoatr'izay - mbola tsy ampiasaiko io TV 1 io). Eny ary, fa ahoana ny amin'ny turntable? Eto aho dia nividy tsipika marani-tsaina. Ity fitaovana ity dia ahafahako mitantana fifandraisana tsirairay (na indray mandeha). Tsy vahaolana tonga lafatra io, satria manana bokotra "on / off" misaraka ny turntable, ka indraindray tsy maintsy tsindrio izany (raha misy mahalala ny fomba hialana amin'ity olana ity dia mifandraisa aminay). Izaho koa dia misy console ampifandraisina (saika tsy ampiasaiko izany) sy jiro taratra ao amin'ny kabinetra, ary eny ... ary mpijinja avy amin'i Xiaomi ho an'ny fampidirana USB.
Fakantsary fanaraha-maso eny an-dalana
Eto, rehefa nandalo fitsapana aho dia hotononiko koa ny fakantsary Sonoff miaraka amin'ny anarana tsara hoe GK-200MP2-B (famerenana eto). Tsara ny fakantsary, fa tsy ny tsara indrindra. Izy io dia mirakitra an-tsoratra amin'ny Full HD, manana Night Vision ... fa ny fatiantoka lehibe indrindra dia ny rafitra fitiliana ny hetsika. Ny fakantsary aza dia hahamarika ny fihodinany ho "mihetsika". Ny vidiny dia mety ho ambany noho ny fahaizany (amin'izao fotoana izao ny vidiny dia eo amin'ny PLN 170). Na izany aza, amin'ny maha fakantsary azy, ohatra, ho an'ny lakaly ambany dia manao ilay asa izy.
Avelao hisy hazavana - izany hoe "trano hendry" manazava!
Ny dingana manaraka ny zava-niainako niaraka tamin'ny trano marani-tsaina dia maivana. Ary teto aho dia nanomboka drafitra matotra. Izaho dia nitady fototra tsara. I Fate dia te hahazo switch avy any Sonoff, izay tsy hitako taty aoriana. Nihevitra aho fa handeha tamin'ity lalana ity, saingy tsy nanana ilay antsoina hoe tariby tsy miandany. Tamin'izany no nahitako ny Q-touch (famerenana eto). Rehefa afaka herintaona dia nahatsikaritra kilema iray izay tsy haiko nesorina. Raha izany, rehefa manomboka "mivaingana" ny vata fampangatsiahana ny Q-touch switch dia "tsindrio" tampoka ny jiro ao amin'ny iray amin'ireo efitrano. Ireo jiro rehetra ireo dia miasa ao amin'ny app Ewelink - noho izany ny fiheverako bebe kokoa fa fitaovana hafa manohana jiro no miasa amin'ity sehatra ity. Ary noho izany ny set dia natambatra tamin'ny sensor, ny varavarana / ny varavarankely fanokafana, ny bokotra roa, ny sonoff mini, ny mari-pana sensor - izy rehetra mifandray amin'ny Sonoff Zigbee Bridge (famerenana eto). Amin'ny farany, hasehoko anao ireo seho napetrako tao amin'ny efitranoko.
Fakan-tsary ao an-trano
Ary eto koa - raha tsy ny maha-editor ahy ny SmartMe dia tsy ho nahalala momba ity fakantsary ity aho. Eufy Indoor Cam (famerenana izay mety ho hitanao eto). Fakan-tsary avo lenta (ary tsy lafo mihoatra ny recorder Sonoff). Napetrako tao amin'ny toerana toy izany ny Eufy Indoor Cam izay mpangalatra mety "hisambotra" azy amin'ny toe-javatra rehetra. Azoko antoka fa azoko omena an'iza na iza.
Tena Smart Home - seho afaka hanamora ny fiainana.
Eny, ny trano marani-tsaina (na fohy kokoa: trano hendry) dia iray izay hifanaraka amin'ny mpampiasa. Ka manao ahoana ny automatisation-ko?
Amin'ny voalohany, hanomboka amin'ny tranokala Google aho. Eto aho dia manana fanao mahazatra toy ny:
Salama maraina - manome ny toetry ny andro, ny fari-piainan'ny lalana, mamelona ireo mpandahateny (izay tsy marani-tsaina), manome fotoana, fampahatsiahivana, mametraka ny feon'ny haino aman-jery ary mamadika mozika.
Fotoana hatoriana - manome ny toetr'andro ho an'ny rahampitso, manome ny teboka voalohany rahampitso, mametraka fanairana, mamono ny fitaovana rehetra.
Ao an-trano aho - mamelona ireo mpandahateny sy herinaratra amin'ny PS4, mametraka ny habetsaky ny multimedia, mamadika ny radio.
Miala amin'ny trano aho - mamono ny fitaovana rehetra
Eto no homeko anao ny seho mahaliana indrindra. Vonona hihazakazaka manodidina ny amin'ny 19 hariva isan'andro izy rehetra.
ny vavahady lehibe hidirana ao an-trano dia mampirehitra jiro ao amin'ny efitrano -> miditra ao amin'ny efitrano aho dia maty ny jiro ao amin'ny efitrano, ary mandeha ny jiro mijoro
ny fidirana ao an-dakozia dia mampihetsika ny jiro LED amin'ny lafiny iray (mila mividy Sonoff mini amin'ny lafiny faharoa aho) -> ny sensor tsy mahita ny fihetsehana, maty ny jiro
miditra ny fandroana dia mampirehitra jiro
Eny, ho an'ny trano manan-tsaina toy izany dia mila switchboard lehibe isika (nieritreritra ny mpamaky sasany). Tsy voatery. Sendra ny fisian'ny kabinetra ato an-tranoko misy metatra fandrehitra ao anatiny. Toerana tsara ho an'ny fitaovana toy izany! Indrindra rehefa manana "rindrina" banga amin'ny zavatra toy izany isika.
Drafitra ho an'ny ho avy
Inona ary ny manaraka? Satria manana mari-pana momba ny mari-pana aho dia mendrika ny hampiasa vola amin'ny termostat marani-tsaina izay hapetraka mifanaraka amin'ny mahazatra. Na izany aza, mbola manana ny fividianana Google Hub ho an'ny lakozia any an-dohako ho fahitalavitra "kely" aho. Ho fanampin'izany, rafitra fiarovana avy any Eufa sy lakolosy misy fakan-tsary ary hidy marani-tsaina avy amin'i Tedee.
Paweł dia olona miabo be izay manafina tsiambaratelo mihoatra ny iray? Tiany ny Google Home sy izay rehetra mifandray aminy. Tsy matahotra ny hilaza ny heviny izy, ary ny tanjony dia ny famolavolana trano marani-tsaina mba tsy hahitana azy. Faly aho fa mandinika ny vokatra sy ny fakantsary Smart Home - oh: fakan-tsary.
# Tonga trano hisolo miaraka amin'ny # Ho trano ianao!
Aqar, trano hendry, iRobot, Coronavirus, Philips, roborock, Robot, manan-tsaina an-trano, xiaomi
Amin'ny zava-misy ankehitriny dia mandany fotoana be any an-trano izahay: miasa lavitra izahay, milalao ankizy, mijery tele, mahandro. Izy io koa dia manampy amin'ny fandinihana izay asa azontsika atao ao amin'ny trano fonenanay. Ao amin'ny lahatsoratra anio ...